बिपद्का बेला बालबालिकाको मानसिक अवस्था - Health Today Nepal
March 26th, 2020 स्वास्थ्य सुझाब0comments
नेपालको कानुनले बालबालिका भन्नाले १८ वर्षभन्दा कम उमेर समुहका व्यक्तिलाई भन्ने बुझाउछ । बालबालिकाहरु स्वभाविक रुपले नै चन्चले, नयाँ कुरा जान्न उत्सुक हुने स्वभावका हुन्छन् । उनीहरु वयस्कहरु जस्तो सधैभरि एकै ठाउँमा बसि रहन वा बसेर ठुला मानिसको जस्ता गम्भिर व्यवहारहरु देखाउन सक्दैनन् । यो हरेक ब्यक्तिको बालापनको विशेषता हो । त्यसलै पनि उनीहरुलाई बालबालिका भनिएको हो ।
हिजोआज हामी कोरोना भाईरसको विश्वब्यापी महामारीको चपेटाबाट गुज्रिरहेका छौं । यस्तो विपद्को बेला बालबालिकाको मानसिक अवस्थाको ख्याल हामी अभिभावकले गर्नु पर्ने नै हुन्छ । घरमै छन्, अभिभावकसंग छन्, खाएकै छन्, बसेकै छन्, हल्ला गरेकै छन् भनेर यत्तिकैमा चित्त बुझाउने अवस्था छैन । विशेष परिस्थितिमा वालबालिकालाई विशेष खालको हेरबिचारको आवश्यक्ता पर्दछ । (कोभिड १९ ) कोरोना र अन्य यस्तै खालका विपत्तिहरुसंग जुधिरहेका बेला बालबालिकाको मानसिक अवस्थालाई कसरी सुरक्षित राख्ने यसमा अविभभावक र स्वयं बालबालिकाले नै आफुलाई मानसिक अवस्थाबाट सुरक्षित राख्न के गर्न सकिन्छ भनेर सचेत रहनु पर्ने हुन्छ ।
यस्तो समयमा बालबालिकाप्रति अभिभावकको दायित्व
स्वभावैले ९ वर्ष देखि १८ वर्ष सम्मका बालबालिकाअलि जिज्ञासु स्वभावका हुने गर्छन् । उनीहरुको मनमा धेरै प्रश्नहरु हुने गर्दछन् । के,कहाँ, कसरी, किन,कहिले जस्ता प्रश्नले उनीहरु भरिएका हुन्छन् । सानो सानो कुरामा पनि उनीहरु प्रश्न गर्ने हुन्छन् । उनीहरुले प्रश्न सोधिरहेको बेला अभिभावकले झर्को र झिझो मान्ने काम गर्नु हुदैन । यसले बालबालिका झनै दुखी हुने गर्छन् । अहिले सुचनाको युग हो । विभिन्नखाले संचार माध्यममार्फत बालबालिकाहरुले सूचनाहरु पाईरहेका हुन्छन । सामाजिक संजालबाट पनि धेरै किसिमका सुचनाहरु पाईरहेका हुन्छन् । विपदको समयमा उनीहरुले परिवारका सदस्य तथा समुदायबाट विभिन्न खाले कुराहरु सुनिरहेका हुन्छन् । बालबालिकाले सुनेका सुचनाहरु राम्ररी विष्लेषण गर्ने अवस्थामा उनीहरु पुगेका हुदैनन् । यसलाई अर्धज्ञानको रुपमा लिईरहेका हुन्छन् । उनीहरुले विषयको पुर्ण ज्ञान नपाइरहेको अवस्था हुनसक्छ । यस्तो समयमा अभिभावकले आफ्नो बालबालिकाले यस कोभिड १९ वा कोरोना भाईरसलाई र यस्ता खाले डर पैदा गर्ने कुराहरुलाई कसरी बुझिरहेका छन्, त्यसको बारेमा सोध्नु जरुरी हुन्छ । त्यसैले बालबालिकालाई पहिला प्रश्न सोध्नुहोस् कोभिड १९ वा कोरोनाको बारेमा के कसरी बुझेका छन् ? उनीहरुसंग बसेर छलफल गर्नुहोस्, यदि उनीहरुले सहि ढंगले बुझेका रहेछन् भने सहि कुरा बुझेकोमा प्रोत्साहन गर्नुहोस् ।
बालबालिकाको बुझाई गलत रहेछ भने त्यसलाई अभिभावकले ठीक तरिकाले बुझाउने कोसिस गर्नुपर्दछ । यसो गर्दा बालबालिका परिवारले आफुलाई महत्व दिएको छन् भनी खुशी हुने गर्छन् र अर्को तर्फ गलत र भ्रामक सुचनाका कारण जोखिमपुर्ण अभ्यास, ब्यबहारहरुबाट पनि जोगिन्छन् । अविभभावकले बालबालिकालाई अन्य विपद्को बारेमा पनि जानकारी गराउनु पर्छ । जस्तै ः भुईचालो , वाढीपहिरो , चट्याङ्ग , झाडापाखाला जसले गर्दा बालबालिकाले कोभिड १९ मात्र नभएर अन्य विपदको बारेमा पनि जानकारी पाउँछन् । अन्य विपदमा पनि समाधानको उपाय हुन्छन् जस्तै बाढीपहिरो मा उद्धार गर्नु , झाडापाखालामा औषधिवितरण गर्नु , चटयाङ्गबाट बच्न चेतनामूलक कार्यक्रम चलाउनु जस्तै कोभिड १९ मा पनि समाधानको उपाय भनेको लक डाउन गरि आफ्नै घरमा बस्नु एउटा समाधानको उपाय मात्र हो भनि बालबालिकालाई मानसिक विचलित हुन नदिनको लागि बुझाउनु पर्दछ । घरमा बस्ने , भिड्भाड्मा नजाने , मिचीमिची पटक पटक साबुन पानीले हात धुनुपर्छ यस्ता कुराले गर्दा कोरोना लाग्दैन भनी उनीहरुलाई उनीहरुकै बालभाषा र शैलिमा बुझाउने गर्नु पर्दछ ।
बालबालिकाको अगाडि कोरोना भाईरसले यति जनाको मृत्यू भयो यति जना सिकिस्त भएछन् भनि नकारात्मक कुराहरु मात्र पनि गर्नु हुदैन । यस्ता नकारात्मक कुराहरुले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । यस्ता सुचना र समाचारले उनीहरुमा डर पैदा हुने, बालबालिकामा मुटुको धड्कन तेज हुने, निराशहुने, खाना नखाने जस्ता समस्याहरु डराउने जस्ता लक्ष्यणहरु देखिन सक्छन् ।
बालबालिकाको अगाडि सकारात्मक कुराहरु गर्ने गर्नुपर्दछ । जस्तै, विश्वमा कोरोना भाईरस लागेर पनि यति जना मानिसहरु बचेर घर फर्कनु भएको छ । त्यसको संख्याको बारेमा जानकारी दिने गर्नु होस । बालबालिकालाई घर भित्र राख्नको लागि भनेर नकारात्मक अनलाईन सामग्री तथा भिडियो देखाउने काम बालबालिकालाई अभिभावकले नगरौं । बालबालिकालाई आफन्त तथा कुनै साथीभाईसंग तुलना नगरौं । जसरी बालबालिकाका अनुहार फरक फरक हुन्छ त्यसै गरी उनीहरुको स्वभाव तथा क्षमता पनि फरक फरक हुन सक्छ । त्यसले यस्तो विपद्को बेलामा आत्तिनु हुदैन, डराउनु हुदैन हामी अभिभावक तथा आफन्तहरु तिमीहरुसंगै छौं भनि कुरा बुझाउने काम गर्नु पर्छ ।
अहिले धेरै बालबालिकाहरु बार्षिक परीक्षा सकेर घरमा नै छन् । धेरै अभिभावकले हिउँदे छुिट्टमा घुमाउँन लान्छु भनेर बाचा कबुल पनि गरेको हुन्छन् । यस्तो बेलामा उनीहरुलाई संम्झाई बुझाई परिस्थितिसाम्य भएपछि घुम्न जान सकिन्छ लाने छु भनेर आश्वस्त पार्दै गर्नु पर्छ । बालबालिकाहरु वयस्कले जस्तो गरि समय विताउन सक्दनैन् । उनीहरुको उमेर खेल्ने, कुद्ने र मनोरञ्जनगर्ने भएकोले अभिभावकले घर भित्र बसरे के कसरी उनीहरुलाई मनोरञ्जन दिन सकिन्छ भनि बालबालिकासगै बसेर योजना पनि बनाउँने गर्नु पर्दछ । बालबालिकासगै बसेर बनाएको योजनालाई बालबालिकाले अपनत्व पनि लिने गर्दछन् । अभिभावकले आफ्नो एकल योजनालाई बालबालिकालाई जबर्जस्ती लागु गर्न प्रति लाद्न भने खोज्नुहुदैन, जसले गर्दा बालबालिका रिसाउने र झर्किने तथा मन लगाएर मनोरञ्जनन गर्ने पनि हुन सक्छन् । त्यसैले यो विपदको समयमा आफ्नो बालबालिकालाई प्रर्याप्त समय दिन अभिभावकलाई अनुरोध छ । त्यसैले तपाईको महत्वपुर्ण समयले आफ्ना कलिला बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य तन्दुरुस्त राख्नकालागि निक्कै सहयोग पुर्याउँछ ।
विपदको बेलाबालबालिकाहरुले के गर्नुपर्दछ ?
बालबालिकाले पनि अभिभावकको कुरालाई ध्यान दियर सुन्ने, समस्याबाट जोगिने र भय हटाउने समाधानको उपायहरुलाई लागु गर्नु पर्छ । पोषिलो खानेकुराहरु नियमित रुपमा खाने, सफा पानी पिउने, धेरै टिभि, मोबाइल तथा ट्याबहरु हेर्नु हुदैन । यसका साथै घर भित्र नै खेल्ने खेलमा मनोरञ्जन लिने, आफुलाई मन पर्ने गीत, कथा , कविताहरु गाउने र लेख्ने बानी बसाल्नु पर्छ । यस्तो बेला आफ्नो अभिभावकसंग समय बिताउने र आफुलाई मन पर्ने काममा परिवारका सदस्यहरुलाई सघाउने गर्नु पर्छ । आफ्नो साथीभाइहरुसंग भाइबर , म्यासेन्जर र टेलिफोन मार्फत कुरा गर्ने, साथीहरुले लक डाउनमा बसेर आफुले भन्दानयाँ के गर्देछन् भन्ने कुरा बुझी आफुले पनि गर्न सकिन्छ भनी चाँसो देखाउनु राम्रो मानिन्छ । विहान उठेर आफनो विद्यालयम ासिकाए जस्तो ध्यान गर्ने र व्यक्तिगत सरसफाईमा ध्यान दिनु बिर्सनु हुदैन ।
(धरेल मनोविर्मशकर्ता हुनुहुन्छ ।
Previous article कोरोना संक्रमित २ जनाको टेकुमा उपचार हुदै, एक निको भएर घर फर्किसके
Next article स्वास्थ्यकर्मीका लागि पीपीईको तत्काल व्यवस्था गर्न पौडेलको आग्रह